Ntuziaka - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Ihe mara mma na ọtụmọkpọ ya
Anyị na-agabiga oge siri ike mana oyi na-ahapụ anyị, ụbọchị na-ekpo ọkụ na-eru nso na ...
Japan nwere ọtụtụ ọdịnala, mana dịka oge nke afọ ọ dị m na ọ bụ oge dị mma iji ...
Otu n'ime ugwu ndị ama ama n'ụwa bụ Ugwu Olympus, ugwu kachasị ewu ewu na Gris na ...
Ọ na-adị gị ka ị na-eme njem naanị gị? Anyị na-egosi gị obodo ise ndị bụ ọmarịcha ebe ịnụ ụtọ ọ bụrụgodi na ịsoghị gị.
Iri nri na Tokyo na-abụkarị oriri na ọ butụ mana na ebe 5 ndị ​​a ọ bụkwa ihe kacha njọ n'ụwa: vampires, psychedelic nrọ, ninjas ...
Gbazite ụgbọ ala na Ireland wee kụọ ụsọ osimiri Atlantic: 2500 kilomita na ọmarịcha Oke Osimiri Atlantic! Osimiri, ọnụ ọnụ ugwu, nnukwu ụlọ, obodo.
Kanazawa, nke amara nke mgbe ochie Japan
Iji mara Japan ee ma ọ bụ ee, ị ga-agarịrị Kanazawa, obodo nwere ọmarịcha ọhụụ ndị Japan. Castle, temple, ninjas, samurais.
Doha, isi obodo Qatar, nwere ọtụtụ ndụ abalị ma ọ bụrụ na ị gaa njem, egbula oge iyi uwe mara mma iji gaa n'ụlọ mmanya na ịgba egwu.
5 omume dị egwu ị ga-eme na Beijing
Ruo oge ụfọdụ, Beijing abụrụla otu n'ime ebe kachasị mma Asia na-eme ...
Ghostbusters Tour na New York
Ọ bụrụ n’ịga New York ma ihe nkiri a masị gị, enwere ọtụtụ ihe ị ga-aga, mana ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke The Ghostbusters ị ga - ahụ ebe ha dị. Gaa njem Ghostbusters!
Ọhụrụ Caledonia, obere akụkụ ụwa
Like na-achọ ịnọ oge ọkọchị na paradaịs ndị dịpụrụ adịpụ? Gbalịa gbalịa New Caledonia, agwaetiti mara mma nke nwere ọtụtụ puku ala: osimiri, mangroves, ọnụ ọnụ ugwu, oke ọhịa
Iche nlegharị anya na Stockholm
All obodo na-iju ebe ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ime otu ihe ahụ dị ka ndị njem nleta niile, dee ndị a iju nleta na Stockholm.
You maara ụgbọelu azụmahịa kachasị ukwuu n'ụwa? Ọ bụ Airbus A380, ụgbọ elu nwere okpukpu abụọ nwere mmanya na ịsa ahụ. Mara ya!
Vanuatu, paradaịs dị anya
Amachaghị nke ọma karịa Tahiti ma ọ bụ Bora Bora mana ọ mara mma dịka Vanuatu, na South Pacific. Agwaetiti ndị ahụ na-enye ụsọ mmiri, ugwu mgbawa, oké ọhịa, na ọbụna anụ ndị na-eri anụ.
Ọ mmụta site na Kyoto
Gburugburu Kyoto dị ebube nke ijide n'aka ileta ha: Arashiyama, Kokedera, Katsura na ọtụtụ puku uhie toris nke Fushimi Inari.
Jamaica na obodo ndi ozo na reggae dika ndi ozo. Otu izu na Jamaica bụ ihe kachasị mma: osimiri, nsụda mmiri, oke ọhịa, ugwu na ọtụtụ rum.
Ì chetara Caribbean? Ọfọn, Barbados bụ ebe dị mma: osimiri mara mma, oke osimiri nrọ, akụkọ ihe mere eme na ọtụtụ ihe.
Na Vietnam ị gaghị echefu Cu Chi Tunnels: n'okpuru ala, obere, warara na nnukwu ihe nketa nke Agha Vietnam.
Ọ ga-amasị gị ịga Gibraltar? Bọchị ole na ole zuru ezu ịgbago na ịrị elu nkume, rie, jee ije ma nwee ọ .ụ.
Nchegbu dị ukwuu maka onye njem ọ bụla karịrị oke ibu nke ụgbọ elu na-achịkwa. Mgbe ọ na-abịa…
Ndụ abalị na Dubai, otu esi ekpori ndụ
Are na-aga Dubai? Ọfọn, ọ karịrị nnọọ ọzara na ịzụ ahịa, ọ nwere ndụ abalị dị egwu! Wunye uwe ị ga-apụ n'ihi na ị ga-enwe ọmarịcha oge.
Ọ bụrụ n’ịga Tokyo n’oge ọkọchị, jide n’aka na ị ga-anwale nri oge anwụ kacha mma n’isi obodo Japan. T ga-eju ha anya na ụtọ ha dị!
Ọ bụrụ na ịmaghị otu esi aga China, soro ntuziaka a ebe anyị na-egosi gị ụzọ kacha mma iji gaa Chibna: ụgbọ elu, ụgbọ oloko, okporo ụzọ ...
You na-aga Paris na ọkọchị? Echegbula onwe gị, enwere ọtụtụ ọdọ mmiri iji mee ka jụụ ya mere kpọọ ụfọdụ n'ime ndị kacha mma.
Ihe ị ga-eme ụbọchị 3 na Havana
Na-aga Cuba? Adọkpụla ngwa ngwa gaa n'ụsọ osimiri ya. Gaa ụbọchị 3 na Havana ma chọpụta akụkọ ntolite ya, ọdịbendị ya na ihe nketa ya. Will gaghị akwụsị iju gị anya!
Mgbe ị gara paris, akwụsịkwala ije n'okporo ụzọ ya na ịrị ụlọ ya kachasị elu. Ga-esi mara 5 kacha mma panoramic isi nke Paris!
Chọpụta nke bụ ebe kachasị mma n'ụwa iji njem dịka ndu Lonely Planet. Ebe ndị dị ịtụnanya nke a ga-elerịrị ma ọ dịkarịa ala otu ugboro.
Zute Great Budda nke Kamakura na Japan
You nọ na Tokyo? Were ụgbọ oloko wee bịa lelee Buddha buru ibu nke Kamakura, nnukwu ihe oyiyi na obodo ochie na nke magburu onwe ya.
Auckland bụ nnukwu ebe na New Zealand. Obodo mara mma, ma ọ bụrụ na enwere, na-enye anyị ọtụtụ ihe ndị a na-eme n'èzí. Chọpụta ha!
Chọpụta ihe Bolivia nwere maka gị: mkpọmkpọ ebe oge ochie, obodo ndị na-achị obodo, ụlọ nnu mara mma, nnukwu mmadụ. Ọtụtụ ebube!
Ọ bụrụ na ị na-achọ sọọfụ, Peru na ọdịnala oge ochie mgbe ahụ Huanchaco bụ ebe ị na-agaghị echefu. Ọ bụ spa na ndị si n'akụkụ ụwa niile.
Nwoke na-ere ọkụ, ememme n'etiti nka na ihe omimi
Art, egwu kọmputa, afọ ọhụrụ, Mad Max, ịgba ịnyịnya, ihe niile bụ ememme Ọkụ Ọkụ na United States. You maara ya?
Ihe egwuregwu na-amasị gị? Mgbe ahụ ị ga-aga mara Suriname, obere mba America nwere ụdị dịgasị iche iche dị egwu.
Ga ileta Petra na-ewe oge na nhazi n'ihi na enwere ọtụtụ ịhụ. Ya mere, o gosiputara ihe omuma kacha mma iji mara akuko nke Jọdan.
Na 2017 a na-eme ememme narị afọ nke mgbanwe Russia wee nwee ike ịhazi njem. Ya mere, dee akwụkwọ ntuziaka a nke ihe ị na-agaghị echefu na Moscow
Ì chere na Iceland bụ ebe dị oke ọnụ? Nwere ike ịchekwa oge niile ka m wee gwa m njem dị ọnụ ala na Reykjavík, isi obodo ya.
Ga Australia, ọ bụghị naanị ịnọ na Sydney Melbourne, nye Canberra ịnwale! E kwuwerị na ọ bụ isi obodo.
Mgbe ị na-aga na Stockholm na-eme nke ọ bụla n'ime ndị a anọ magburu onwe njegharị obodo: e nwere ghosts, ama akwụkwọ, elu uko ụlọ na ụgbọ mmiri njem.
Chọrọ ebe ọ bụ oge ọkọchị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile? Mgbe ahụ gaba na Caribbean ma nwee ọmarịcha agwaetiti Santa Lucia. Will gaghị akwa ụta!
Na njem site na Colombia, echefula ileta Barranquilla, obodo nke kacha mma na Latin America.
Bọchị anọ na Dubai, okomoko na exoticism
Dee akwụkwọ ntuziaka a ka ịnụ ụtọ ụbọchị anọ na Dubai. Ha agaghị echefu echefu!
Na-aga Malta? Ha bụ agwaetiti atọ nke ọdịdị ala, akụkọ ntolite, ụlọ arụsị oge ochie na gastronomy dị ụtọ. Echefula ya!
V nwere ụbọchị atọ na Vienna? Dee ihe niile ị nwere ike ime ma nwee obi ụtọ n’obodo a.
Oké osimiri dị omimi na-edebe ezi ọla maka ndị na-anwa ịbanye na mmiri ya iji chọpụta ha….
Njegharị nke ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke United States na Canada, akụkụ abụọ
Kporie njem nlegharị anya nke obodo ndị kachasị akụkọ ihe mere eme na nke mara mma nke ugwu ọwụwa anyanwụ North America, United States na Canada.
Njegharị nke ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke United States na Canada, akụkụ nke mbụ
Ugwu ọdịda anyanwụ North America nwere obodo ndị njem nleta kachasị na Canada na United States. Ihe kachasị mma bụ ijikọ ha niile na njem a na-agaghị echefu echefu, ị na-eche?
Ọ bụghị naanị Boracay na Philippines, maka ịmị mmiri na nsị ọ nweghị ebe ọzọ dị ka Cebu na agwaetiti ya.
Ihe niile ịchọrọ ịma iji nọrọ ụbọchị ole na ole na Okinawa, ebe okpomọkụ Japan.
Paris n'oge okpomọkụ, ihe ị ga-eme
Oge anwụ erubeghị, ya mere dee ndụmọdụ ndị a iji nwee obi ụtọ n'oge ọkọchị na Paris: egwu, ebe ihe nkiri, ụsọ osimiri, sinima.
Soro Castzọ Castle nke Scottish
A ma ama na Scotland maka ụlọ ya ma ị nwere ike ịgbaso Okporo Castlọ Scottish iji hụ ihe kachasị mma, nke kachasị mma, nke a na-agaghị echefu echefu.
Na-atụ aro ebe aga Portugal
A njem site na Portugal na-adịghị ezu ma ọ bụrụ na ị gaghị gaa obodo ndị a. Ikpokọta akụkọ ihe mere eme, ọdịdị ala, ọdịbendị na gastronomy ọ gaghị echefu echefu!
You nọ na Tokyo ma na-eche ma ị gaghị eleta Odaiba? Egbula! Agwaetiti, njem ahụ, ihe niile, dị egwu.
Ọ kachasị mma site na Nice
Ọ bụrụ na ị gaa Nice n'oge ọkọchị a, jide n'aka na ị gara ileta obodo French Riviera mara mma. Ha emeela agadi ma maa mma!
Osimiri dị ọnụ ala na Spain
Cheapchọta ebe osimiri dị ọnụ ala na Spain dị mfe. Anyị na-agwa gị banyere ebe dị mma ise dị na mpaghara Spanish.
Ọ bụrụ n’ịga New York n’oge ọkọchị enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma mee n’èzí: ogige ntụrụndụ, ụsọ osimiri, ịgagharị, njem ụgbọ mmiri, egwu na oriri na nkwari.
Onye ndu m na Tokyo, ihe na-agaghị efu
Na-eduzi ihe ị na-agaghị echefu na Tokyo, obodo kachasị mma na Eshia!
Ngwa njem kachasị mma nke 5 iji hazie njem gị
Ga njem na-atọ ụtọ mgbe niile. Mara mara ọhụụ, ọdịbendị, gastronomies ... Ma, ebe ị ga-amalite ịhazi atụmatụ ahụ na ...
Oge ezumike m na Kyoto, na-eduzi ịnụ ụtọ obodo oge ochie
You nweghị ike ịga Japan ma ghara ileta Kyoto: ọ meela agadi, ọ na-atọ ụtọ, ọ mara mma ma ọ naghị akwụsị ịdabere na gị.
Ihe okike asaa nke ụwa
Mara 7 oke ebube nke ụwa, họpụtara site votu na-ewu ewu, na-echeghị ebe ndị a kwesịrị-ahụ.
Osaka anaghị agwụ ike. Ọ nwere ụlọ, ọwa mmiri, ụlọ ahịa na ndụ abalị dị egwu!
Hiroshima bụ obodo nke atọmịk atom ma ọ bụrụ na ị nwere ụbọchị atọ, ị gaghị echefu ya. Ọ bụ ihe a na-agaghị echefu echefu!
Oge ọkọchị na Aland Islands, n'etiti Sweden na Finland
Chọrọ oge ọkọchị dị iche? Gaa Aland Islands, agwaetiti Finnish ebe a na-asụ Swedish.
Portuguesezọ Portuguese gaa Santiago
Portuguesezọ Portuguese nke Camino de Santiago bụ nke abụọ kachasị na-eme mgbe French, na akụkụ nke Tui, na ndịda Galicia.
Mgbe anyị chere banyere Hawaii ihe mbụ na-abata n'uche bụ osimiri mara mma na-acha ọcha ọcha na ...
Ọ dị gị ka Norway bụ ebe mara mma ma dịkwa oke ọnụ? Akwụsịla, dee ozi a na-akwụ ụgwọ na ebe nkiri na njem ịnụ ụtọ.
Ọ dị na mpaghara Badulla (nke dị na Uva) na ogo nke 1050 dị elu karịa oke osimiri. Jikọọ na Colombo na Kandy (isi obodo nke mba ahụ)
Praslin, Mahe na La Digue bụ ebe atọ kachasị ewu ewu na paradaịs n'ụwa - agwaetiti Seychelles.
Ntuziaka iji gaa Fallas nke Valencia: tipsfọdụ ndụmọdụ
Ọ bụrụ na n'oge na-adịghị anya, anyị ga-anụ ụtọ izu ụka dị nsọ, ọbụlagodi n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ Fallas nke Valencia, ...
Ebe 10 kachasị mma 2016 dika Lonely Planet (II)
Ọ bụrụ n ’ụbọchị gara aga anyị gwara gị ebe ise aga - aga 2016 dị ka Lonely Planet si dị, taa ọ bụ oge gị ...
Ebe 10 kachasị mma 2016 dika Lonely Planet (I)
O doro anya na unu niile maara Lonely Planet, otu n'ime ndị na-ebipụta akwụkwọ nduzi kachasị mma n'ụwa, yana ntuziaka ...
Eduzi ka ị nweta ejị na Galicia
Ee, anyị amaraworị na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka emume anyị na-echekarị banyere ndị nọ na Rio de Janeiro, na obere ...
Kedu ndagwurugwu kachasị mkpa n'ụwa?
Ma 10 ndagwurugwu kachasị mkpa n'ụwa? Echefula ebe ndị a pụrụ iche na ihe nzuzo ha na-ezo maka ndị bịara leta ha.
Iche echiche ịga njem na Boracay? Anyị na-agwa gị nhọrọ ikuku, oke osimiri ma ọ bụ ala ị ga-aga ebe a mara mma na Philippines.
Mara anụmanụ ndị a na-ahụkarị n'ugwu Alps na Switzerland, ụdị anụmanụ dị iche iche dịgasị iche iche nke nwere ọtụtụ ụdị. Want chọrọ ịma ha?
Anyị na-achọpụta Skagen na Denmark, ebe dị egwu ebe osimiri abụọ na-ezute ma gosi anyị ụdị ala na-adịghị ahụkebe. Want chọrọ ịhụ ya? Banye!
Quilotoa bụ ugwu ọkụ nke Ekwedọọ nke gbakọtara na ndagwurugwu ya ihe akpọrọ ọdọ mmiri. Otu n'ime egwu kachasị egwu ọkụ na ụwa.
Enwere ọtụtụ ụsọ osimiri dị na Andalusia ndị na-ewu ewu ma dị ukwuu, anyị na-egosikwa gị ụzọ atọ kachasị mma, nke ị na-ekwesịghị ịhapụ ma ọ bụrụ na ị gaa ndịda.
Tokyo - Kyoto na Nozomi Super Express Shinkansen
Anyị na-agwa gị ihe njem Tokyo - Kyoto dị ka n'ụgbọ ụgbọ ala Japan ma ọ bụ Shinkansen, aha a na-akpọ ya ebe ahụ.
Erechtheion bu aha ulo uka ochie nke Gris nke no na akuku ugwu nke Acropolis nke Athens.
Romanticzọ Romantic, njem dị mkpa na ndịda Germany
Romanticzọ Ihunanya (Romantische Strasse) bụ ama ama ama kachasị njem na njem nlegharị anya na Germany.
Uslọ Neuschwanstein, bụ ụlọ nrọ na ndịda Germany
Uslọ Neuschwanstein dị na ọdụ na-ele Pöllat Gorge.
Porquerolles, ebe mgbaba nkịtị nke French Riviera
Porquerolles bụ nke kasị ukwuu na n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke agwaetiti nke agwaetiti Hyeres.
Ofzọ nke njem iji ruo The Hamptons
Ndị Hamptons bụ ogige udo maka ịpụ na Manhattan na-ekwo ekwo. E nwere ọtụtụ ụzọ esi aga mpaghara a nke ejiji karịa mgbe ọ bụla
Ozi gbasara ohere ị ga-eji ụgbọ mmiri gaa New York. A na-ekwu okwu banyere ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri nke Queen Mary 2 na nhọrọ ị ga-aga n'ụgbọ mmiri ahịa.
N'etiti akụkụ kachasị mma nke Lisbon, echiche ya ndị a ma ama na-eburu ebe ohere.
Nhazi nke mpaghara ime obodo Zagreb bu ndagwurugwu dika udi 'U' nke ugwu abuo ya mebere.
Nnukwu ụgbọ elu nke Oceania
Taa, anyị ga-ezute ụfọdụ ụgbọ elu dị mkpa na Oceania. Ka anyị malite site na ịkọ Qantas, ụgbọ elu ụgbọ elu kachasị mkpa na akụkọ ihe mere eme na ...
Mpaghara nke La Manga del Mar Menor
Osimiri na Pernambuco, Fernando de Noronha (II)
Ga n'ihu na osimiri mara mma nke Fernando de Noronha: Playa del Boldró Ọ bụ otu n'ime ihe ndị a na-agakarị, ọ nwere ...
Ezumike kacha mma Langkawi: Otu esi aga ebe ahụ na ego ole imefu?
Aha Langkawi pụtara "ala nke ọchịchọ", echiche nke na-alaghachi n'akụkọ ihe mere eme nke ...
Na-eche echiche ịgagharị na akụkọ ifo India? Tupu ị na-eche maka ụlọ, njegharị na ndị ọzọ anyị kwesịrị ...
E nwere ụzọ dị iche iche esi erute Cambodia. Ọ bụrụ n'ịhọrọ ime ya site n'ikuku, anyị kwesịrị ịdọ gị aka na ntị na enweghị ụgbọelu ...
Isle Man nke Amaghi
Emi odude ke Inyan̄ Inyan̄, ke ufọt England, Scotland, Wales, ye Ireland, enye edi ebiet emi British Crown, ...
Otu esi aga Istanbul
Istanbul bụ otu n'ime obodo ndị mmadụ bi na ụwa, ya mere ọgba aghara dị egwu. Na mgbakwunye, ọ na-asa site na ...
Na-eme atụmatụ njem gị: 1.- flightgbọ elu na-aga Asia.
1.- Maka onye njem nọọrọ onwe ya, ọbịbịa ọdụ ụgbọ elu adịghị mkpa. O doro anya na mgbe ị kpebiri ụbọchị nke ...